Mpikaroka izay mianatra feso tsy afaka manontany azy ireo fanontaniana. Noho izany, feso mpikaroka dia voatery hianatra fitondran-tena. Mpikaroka izay mianatra ny olombelona, ​​amin'ny lafiny iray hafa, dia tokony manararaotra ny zava-misy fa ny mpandray anjara dia afaka miresaka. Ny fametrahana fanontaniana ny olona no toerana lehibe teo amin'ny fiaraha-monina fikarohana nandritra ny fotoana ela, sy ny vanim-potoana nomerika sady manome fahafahana ary mitaky fiovana sasany amin'ny fanadihadiana fikarohana. Na dia eo aza ny tafahoatra fa misy fanadihadiana mpikaroka mahatsapa amin'izao fotoana izao, manantena aho fa ny vanim-potoana nomerika mandeha ho volamena taona ny fanadihadiana fikarohana.
Ny tantaran'ny fikarohana fanadihadiana teny mafy azo zaraina ho telo takela-barahina nifanindritsindry eras, nisaraka roa nanohitra fiovana (Groves 2011; Converse 1987) . Amin'izao fotoana izao isika ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita eo amin'ny faharoa sy ny fahatelo eras, fa ny voalohany sy ny faharoa eras-ary koa ny tetezamita teo amin'izy ireo-manome hahatakatra ny hoavy ny fanadihadiana fikarohana.
Nandritra ny vanim-potoana voalohany ny fanadihadiana fikarohana, mitovitovy 1930 - 1960, fivoaran-draharaha ao amin'ny Siantifika santionany sy ny fanontaniana famolavolana tsikelikely nahatonga maoderina fahatakarana ny fanadihadiana fikarohana. Ny vanim-potoana voalohany ny fanadihadiana fikarohana dia voafaritra amin'ny alalan'ny faritra mety santionany sy ny tava-tava dinidinika.
Avy eo, nisy fivoarana ara-teknolojika-ny miely patrana diffusion ny telefaona an-tariby finday any amin'ny tany manankarena-farany dia nitarika ho amin'ny vanim-potoana faharoa ny fanadihadiana fikarohana. Io vanim-potoana faharoa, mitovitovy tamin'ny 1960 - 2000, dia voafaritra amin'ny alalan'ny kisendrasendra tarehimarika dialing (RDD) mety santionany sy ny antso an-tariby dinidinika. Ny fiovana hatramin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa lehibe niteraka fitomboan'ny fahombiazana ary mihena izany amin'ny vidiny. Maro ny mpikaroka hisaina io vanim-potoana faharoa ho toy ny volamena taona ny fanadihadiana fikarohana.
Ankehitriny, iray hafa-ny fampandrosoana teknolojia nomerika ho mandrakizay amin'ny farany hitondra antsika ho amin'ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana fikarohana. Io tetezamita no ho entin'ny na hanoto sy nampakatra anton-javatra. Amin'ny ampahany, ny mpikaroka ireo dia voatery hiova satria fomba fijery avy amin'ny vanim-potoana faharoa dia namaky teo amin'ny vanim-potoana nomerika (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ohatra, bebe kokoa ny trano tsy manana telefaonina telefaona an-tariby sy tsy valinteny tahan'ny-namaly izay sampled fa tsy mandray anjara amin'ny fanadihadiana-no mitombo (Council 2013) . Niara amin'izany rava ny faharoa-vanim-potoana manakaiky ny santionany sy ny dinidinika, misy tsy mitsaha-mitombo ny fisian'ny loharanom-baovao angon-drakitra lehibe (jereo ny Toko 2) izay toa mandrahona ny hisolo fanadihadiana. Ankoatra ireo antony hanoto, any no misy ihany koa ny mitarika antony: vanim-potoana manakaiky ny fahatelo mampino manolotra fahafahana, tahaka ny mampiseho aho ao amin'ity toko ity. Na dia zavatra tsy mbola tanteraka nanorim-ponenana, dia manantena fa ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana fikarohana dia miavaka amin'ny tsy-mety santionany sy ny solosaina-nitantana tafa sy dinika. Ankoatra izany, na dia ny teo aloha ireo toetra mampiavaka eras araka ny fomba fijery ny santionany sy ny dinidinika, dia manantena fa ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana ihany koa fikarohana ho miavaka ny linkage ny fanadihadiana miaraka amin'ny angon-drakitra lehibe loharano (Table 3.1).
Table 3.1: telo eras ny fanadihadiana fikarohana. Ity toko ity dia hifantoka amin'ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana fikarohana: tsy-mety santionany, solosaina-nitantana tafatafa, ary mifandray amin'ny hafa fanadihadiana rakitra.
Data tontolo iainana
vanim-potoana voalohany 1930 - 1960 Area mety santionany Mifanatrika Mijoroa-irery fanadihadiana
vanim-potoana faharoa 1960 - 2000 Random tarehimarika dialing (RDD) mety santionany Telephone Mijoroa-irery fanadihadiana
fahatelo vanim-potoana 2000 - ankehitriny Non-mety santionany Computer-itantanana Fanadihadiana mifandray amin'ny hafa rakitra
Ny tetezamita eo amin'ny faharoa sy fahatelo eras ny fanadihadiana fikarohana dia tsy mbola tanteraka malefaka, ary nisy masiaka adihevitra momba ny fomba tokony ivoahan'ny mpikaroka. Rehefa manao jery todika ny tetezamita eo amin'ny voalohany sy ny faharoa eras, mihevitra aho fa misy fototra iray lalin-tsaina ho antsika ankehitriny: ny voalohany dia tsy ny farany. Izany hoe, voalohany X-vanim-potoana maro ireo fomba ad-hoc, ary tsy miasa tsara. Nefa, amin'ny alalan'ny asa mafy, mpikaroka namaha ireo olana, ary ny faharoa-vanim-potoana manakaiky ny farany, dia tsara kokoa noho ny vanim-potoana voalohany fomba. , Ohatra, ny mpikaroka efa manao telefaonina kisendrasendra tarehimarika dialing nandritra ny taona maro talohan'ny Mitofsky sy Waksberg lasa kisendrasendra tarehimarika dialing santionany fomba azo ampiharina tsara izay nanana fananana sy ny teorika (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) . Noho izany, tsy tokony afangaro ny amin'izao fotoana izao toe--potoana fahatelo sy ny fomba vokatra faratampony. Ny tantaran'ny fanadihadiana fikarohana mazava tsara fa mahatonga an-tsaha evolves, entin'ny fiovan'ny teknolojia sy ny fiaraha-monina. Tsy misy fomba intsony ny evolisiona. Kosa, dia tokony hamihina azy, raha mbola manohy manovo fahendrena avy aloha eras. Raha ny marina, mino aho fa ny vanim-potoana nomerika no ho mampientam-po indrindra ho an'ny taona mbola nanontany ny olona fanontaniana.
Ny sisa amin'ny toko manomboka amin'ny filazana fa antontan-kevitra lehibe loharanom-baovao dia tsy hisolo ny fanadihadiana sy ny be ny tahirin-kevitra mitombo fa tsy mihena-tena ilaina ny fanadihadiana (sampana 3.2). Noho izany antony manosika, aho mamintina ny fanadihadiana tanteraka fahadisoana rafitra (Fizarana 3.3) izay nitombo nandritra ny roa voalohany eras ny fanadihadiana fikarohana. Ity sehatra dia manome fahafahana antsika hahatakatra ny fomba vaovao solontena-indrindra, tsy mety santionany (sampana 3.4) -ary fomba vaovao ny fandrefesana-in indrindra, fomba vaovao ny fametrahana fanontaniana ny namaly (sampana 3.5). Farany, aho mamaritra môdely ho an'ny fikarohana roa mampifandray Ny valin'ny fandinihana natao ny angon-drakitra lehibe loharano (sampana 3.6).